Vinicius Junior oo guuldarro ka badbaadiyay kooxdiisa Real Madrid kulankii ay Levante ku booqdeen Estadio Ciudad de Valencia … +SAWIRRO – Gool FM
Vinicius Junior oo guuldarro ka badbaadiyay kooxdiisa Real Madrid kulankii ay Levante ku booqdeen Estadio Ciudad de Valencia … +SAWIRRO
(Spain) 23 Agoosto 2021. Kooxaha Levante iyo Real Madrid ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka v, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 3-3 ah, ciyaar ka tirsaneyd kulammada toddobaadka labaad horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Real Madrid.
Daqiiqadii 5-aad durba kooxda Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Gareth Bale, waxaana goolkan si qurux badan kaga caawiyay Karim Benzema.
Laakiin bilawgii qeybta labaad ee ciyaarya, gaar ahaan 46 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Levante ayaa dhalisay goolka bar-bardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Roger oo caawin ka helay saaxiibkiis Gonzalo Melero.
Daqiiqadii 57-aad kooxda Levante ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 2-1 ka dhigay Jose Campana, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Jorge de Frutos.
73 daqiiqo Vinicius Junior oo caawin qurux badan ay kaga timid xiddiga ay dhalasho wadaaga yihiin ee Casemiro ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay garbo siman 2-2.
Daqiiqadii 78-aad markale kooxda Levante ayaa la wareegtay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu laacibkooda Rober ka dhigay 3-2.
Balse markale Vinicius Junior oo caawin ka helay Karim Benzema ayaa wuxuu guuldarro ka badbaadiyay kooxdiisa Real Madrid kaddib markii uu ciyaarta ka dhigay bar-bardhac 3-3 ah.
85 daqiiqo marka ay dheesha mareysay goolhaayaha kooxda Levante ee Aitor ayaa qaatay kaarka roosaha toos ah, kaddib markii uu si ula kac ah gacanta ugu taabtay xerada ganaaxa banaankeeda, kubad uu dhaafsiin rabay Vinicius Junior.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay bar-bardhac 3-3 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Levante iyo Real Madrid, kaddib ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Estadio Ciudad de Valencia.
Chelsea oo dib u bilawday wada xaajoodka ay ku dooneyso saxiixa Kounde & Afar xiddig oo awgii looga fasaxayo Stamford Bridge